The Listb Marketing Marketing anaty: paikady 21 amin'ny fitomboana | Martech Zone
Alatsinainy Janoary 15, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Araka ny azonao an-tsaina, mahazo fangatahana betsaka hamoaka infografika izahay Martech Zone. Izany no antony hizarantsika infografika isan-kerinandro. Tsy miraharaha ny fangatahana ihany koa izahay rehefa mahita infografika izay mampiseho fotsiny fa tsy nanambola be ny orinasa hananganana sary sarobidy. Rehefa nanindry ity sary ity avy tamin'i Brian Downard, mpiara-manorina ny Paikady fandraharahana ELIV8, Fantatro izy ireo hatramin'ny niarahanay nizara asa hafa izay efa vitany.
Ity infographic ity; na izany aza, tsy lavorary fotsiny! Brian sy ny ekipany dia namoaka a infographic vaovao amin'ny fahazoana fitomboan'ny orinasa miaraka amin'ny varotra miditra izay sarobidy, tsara tarehy ary manome ny antontan'isa fototra hamerenana ny paikady tsirairay. Brian sy ny ekipany dia manome serivisy fanoloran-tena sy marketing ho an'ny mpanjifa orinasa marobe.
Inona ny atao hoe Marketing inbound?
Inbound marketing dia paikady izay mampiasa atiny hisarihana ny vinavin-daharana hirotsaka sy hiova amin'ireo orinasa an-tserasera. Mampiasa bilaogy, podcast, horonan-tsary, e-book, taratasim-baovao, whitepapers, fikarohana organika, vokatra ara-batana, marketing amin'ny haino aman-jery sosialy, ary fampiroboroboana karama ny orinasa mba hahatratrarana ny mpihaino kendrena.
Brian dia nametraka ity infographic ity izay manome an lisitra fanamarinana anatiny tetikady manan-danja 21 apetraka izay hampitombo ny orinasanao amin'ny fampiasana paikady marketing miditra.
Sintomy ny lisitra fizarana 94 nanitatra
Ahoana ny fomba hanafainganana ny fitomboan'ny orinasa amin'ny marketing anaty
Mamorona sanda amin'ny bilaogy - Orinasa mahazo bilaogy 77% fifamoivoizana bebe kokoa ary Rohy 97% fanampiny noho ireo izay tsy manao.
Ampiasao ny haino aman-jery sosialy hitarika fifamoivoizana - 2.03 lavitrisa mpampiasa media sosialy omeo fantsona vaovao tsy mampino ny orinasa mitondra fiara fifamoivoizana ary mahita mpanjifa vaovao.
Mampiasà SEO hahazoana Internet - 93% amin'ny traikefa an-tserasera atombohy amin'ny motera #search. Rehefa manatsara ny tranokalanao sy ny atiny ho an'ny motera fikarohana ianao, dia hahita izany ampitomboy ny filahanao ary mahazo fifamoivoizana bebe kokoa.
Manararaotra mpijery olon-kafa - Hitan'ny orinasa a Fiverenana 6-to-1 rehefa afaka mahita sy mampiditra mpihaino mifandraika amin'ny tranonkala hafa izy ireo.
Mamorona doka Retargeting sy PPC an-tserasera - Ireo mpitsidika efa notsongaina dia 70% azo inoana kokoa manova fo ao amin'ny tranonkalanao.
Fifamoivoizana mivantana miaraka amin'ny antso-to-hetsika - 70% amin'ny orinasa tsy manana antso-na-hetsika miavaka amin'ny pejy fandraisam-bahiny.
Mamorona sanda amin'ny tolotra atiny - Miteraka ny #content Premium In-3 mitarika firy toy ny marketing ivelany nentim-paharazana ary vola lany 62% latsaka.
Hanova ny mpitsidika amin'ny pejy fitobiana - 56% amin'ny tsindry tranokala rehetra dia mankany amin'ny pejy anatiny, tsy ny pejy fandraisana.
Mampiasà endrika opt-in hampitomboana ny fiovam-po - Ny orinasa manana opt # forms dia afaka hampiakarana 1000% ny tahan'ny fiovam-po na mihoatra!
Mampiasà porofo ara-tsosialy hamoronana fitokisana - Afaka #reviews ny mpanjifa hampitombo ny fahombiazan'ny marketing amin'ny 54% satria 88% ny olona matoky ny #reviews ny mpanjifa hafa dia matoky ny tolo-kevitra avy amin'ny fifandraisana manokana.
Ampiasao ny fitantanana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa hanarahana ny fitarihana - Afaka CRM mampitombo ny vola miditra amin'ny 41% isaky ny olona mpivarotra rehefa ampiasaina hanaraka sy hikolokolo fitarihana.
Mandefasa mailaka hanakatona ny varotra bebe kokoa - Ny $ 1 lany amin'ny marketing amin'ny mailaka dia misy tambiny averiny $44.25!
Mametraha automatisation marketing - Mandeha ho azy ny mitarika fikarakarana miteraka a Fiakarana 10% na lehibe kokoa amin'ny vola miditra ao anatin'ny 6-9 volana fotsiny.
Mamorona atiny mifantoka amin'ny varotra - 61% ny olona dia azo inoana kokoa fa hividy amin'ny orinasa iray izay manome # kontento.
Mampiasà Analytics mba hahitana fantsona ambony - +50% amin'ny orinasa mahita fa sarotra ny hetsika varotra toetra mivantana amin'ny valin'ny fidiram-bola.
Manàna fanohanan'ny mpanjifa mahatalanjona - 65% ny mpanjifa miala a serivisy ho an'ny mpanjifa tsy manam-paharoa zava-nitranga!
Mamorona fanehoan-kevitra ao amin'ny media sosialy - 53% ny olona izay manaraka marika amin'ny media sosialy dia mahatoky kokoa amin'ireo marika ireo.
Valisoa ireo mpanjifa tsy mivadika - Sarany 5 fotoana bebe kokoa hahazoana mpanjifa vaovao noho ny hitazomana ireo efa misy. Izay no antony maha-zava-dehibe anao valiso ny mpanjifanao mahatoky hitazomana azy ireo hiverina bebe kokoa.
Ampiasao ny personalization handroahana ny fifampiraharahana - Mahita fitomboan'ny 20% amin'ny varotra miaraka amin'ny traikefa manokana sy tolo-kevitra ho omeo ny mpanjifa ny atiny sy ny vokatra tadiaviny.
Mampiasà fitaovana fanaovana fanadihadiana sy valiny - Maharitra Traikefa 12 mpanjifa tsara ny manonitra ihany 1 ratsy traikefa. Hanampy anao ny fanangonana tamberina esory ny vintana amin'ny fanandramana mpanjifa ratsy.
Angony ny hevitra sy fijoroana ho vavolombelona - Mampiseho izany ny fanadihadiana70% ny mpanjifa jereo ireo vokatra # hevitra momba ny vokatra alohan'ny hanaovana fividianana. Ny fangatahana ny mpanjifa ho an'ny hevitra amin'ny fotoana mety dia hipoitra mpisolo vava marika fa manintona olona vaovao.
Tags: Analyticsmpihainofitorahana bilaogyBrian Downardmiantso amin'ny asaantso ho amin'ny hetsikafantsonajereo ny lisitralisitrafiovam-ponybilaogy orinasafitokisanaCRMctampanjifa tsy mivadikafifandraisana amin'ny mpanjifampanjifa fanohananaELIV8mailaka Marketingfitaovana fanehoan-kevitramampihiditra barotralisitra fanamarinana anatinyfiovam-pejypejy pejympanjifa mahatokyautomation marketingtolotraendrika opt-inpersonalizationhevitraatiny mifantoka amin'ny varotraSEOhaino aman-jery sosialyporofo ara-tsosialyfanadihadianafijoroana vavolombelona
28 Okt 2015 amin'ny 1:00 PM
Te hilaza fotsiny hoe misaotra anao indray tamin'ny fizarana sy ny teny soa!
28 Okt 2015 amin'ny 2:05 PM
Mendrika daholo, Brian!
5 Nov 2015 amin'ny 4:16 maraina
Hanamarika an'ity lisitra ity. Thx betsaka
5 Nov 2015 tamin'ny 3:14 PM
Antenaiko fa manampy!
Jan 11, 2016 ao amin'ny 8: 29 AM
Lisitry ny varotra miditra tsara izany nozaraina.